အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် မမှန်ကန်မှုများရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်သည့် ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ အသုံးချရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
"ပြည်သူတွေကို တိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ တိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး တိုင်ပါလို့ ဒီသန်းငါးဆယ်ကို ပြည်သူတွေ အားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း ဘယ်လို လိုက်ပြောရမလဲ။ ကိုယ်က ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် တိုင်သင့်တိုင်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို၊ မတရားတဲ့ ကိစ္စတွေကို၊ မမှန်တဲ့ကိစ္စတွေကို တိုင်ရမယ်။ အဲဒီတော့ အခုဒီမှာ အခန်းထဲမှာဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာက ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကလူတွေက မမှန်မကန်တာ လုပ်တယ်ဆို ပြည်သူတွေက တိုင်ကြပါ။ ကိုယ့်မှာ တိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီအခွင့်ရေးကို ကိုယ်သုံးရမယ်။ မသုံးဘူးဆို အလကားပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားထဲမှာ ပွစိပွစိနဲ့ ပြောနေပြီးတော့ ဟာဒီဝန်ကြီးကဖြင့် မဟုတ်ဘူး။ လုပ်တာ ကိုင်တာတွေက မတရားဘူးဆိုရင် အဲဒီလိုပြောနေလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့မသိရင် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ သိမှစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအရ ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရမှာ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်မှာ အဲဒီလောက်တော့ တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်။ ကြောက်ပြီးတော့ မလုပ်ရဲပါဘူး၊ မတိုင်ရဲပါဘူးဆိုပြီး ထိုင်ပြီးကြောက်နေရမှာလား။ အဲဒီတော့ ကြောက်မနေနဲ့ ပြောစရာရှိတာ ကိုယ်ပြောရမယ်၊ လုပ်စရာရှိတာကိုယ်လုပ်ရမယ်။ တိုင်စရာရှိတာတိုင်ပါ ဘယ်လူကြီးကိုမှ မကြောက်ကြပါနဲ့ "ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဂတိလိုက်စားမှုများကို ဖြေရှင်းရေးအတွက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦးဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းထားပြီး အုပ်စု(၁) အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်တွင် ရုံးဖွင့်လှစ်ထားကာ ဆက်သွယ်လိုသူများအနေဖြင့် myanmaracc2014@gmail. com သို့လည်းကောင်း ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ ၈၁၀၃၂၇၃ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
"ပွညျသူတှကေို တိုငျခှငျ့ပေးထားတယျ။ တိုငျခှငျ့ပေးထားပွီး တိုငျပါလို့ ဒီသနျးငါးဆယျကို ပွညျသူတှေ အားလုံးကို တဈယောကျခငျြး ဘယျလို လိုကျပွောရမလဲ။ ကိုယျက ကိုယျ့အသိစိတျနဲ့ကိုယျ တိုငျသငျ့တိုငျရမယျ့ ကိစ်စတှကေို၊ မတရားတဲ့ ကိစ်စတှကေို၊ မမှနျတဲ့ကိစ်စတှကေို တိုငျရမယျ။ အဲဒီတော့ အခုဒီမှာ အခနျးထဲမှာဆိုရငျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှလေညျးရှိတယျ။ အုပျခြုပျရေးပိုငျးဆိုငျရာက ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျးရှိတယျ။ အဲဒီတော့ အဲဒီကလူတှကေ မမှနျမကနျတာ လုပျတယျဆို ပွညျသူတှကေ တိုငျကွပါ။ ကိုယျ့မှာ တိုငျပိုငျခှငျ့ရှိတယျ။ ဒီအခှငျ့ရေးကို ကိုယျသုံးရမယျ။ မသုံးဘူးဆို အလကားပဲ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကွားထဲမှာ ပှစိပှစိနဲ့ ပွောနပွေီးတော့ ဟာဒီဝနျကွီးကဖွငျ့ မဟုတျဘူး။ လုပျတာ ကိုငျတာတှကေ မတရားဘူးဆိုရငျ အဲဒီလိုပွောနလေို့ရှိရငျ ကြှနျမတို့မသိရငျ ဘာမှလုပျလို့မရဘူး။ သိမှစညျးမဉျြး စညျးကမျးအရ ဥပဒအေရ အရေးယူလို့ရမှာ။ ဒါကွောငျ့ကိုယျ့မှာ အဲဒီလောကျတော့ တာဝနျယူမှုရှိရမယျ။ ကွောကျပွီးတော့ မလုပျရဲပါဘူး၊ မတိုငျရဲပါဘူးဆိုပွီး ထိုငျပွီးကွောကျနရေမှာလား။ အဲဒီတော့ ကွောကျမနနေဲ့ ပွောစရာရှိတာ ကိုယျပွောရမယျ၊ လုပျစရာရှိတာကိုယျလုပျရမယျ။ တိုငျစရာရှိတာတျိုငျပါ ဘယျလူကွီးကိုမှ မကွောကျကွပါနဲ့ "ဟု ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက တိုကျတှနျးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
အဂတိလိုကျစားမှုမြားကို ဖွရှေငျးရေးအတှကျ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးကျောမရှငျကို အဖှဲ့ဝငျ (၁၂)ဦးဖွငျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၃)ရကျနကေ့ ဖှဲ့စညျးထားပွီး အုပျစု(၁) အားကစားလကေ့ငျြ့ရေးစခနျး၊ ဝဏ်ဏသိဒ်ဓိရပျကှကျ၊ နပွညျေတျောတှငျ ရုံးဖှငျ့လှဈထားကာ ဆကျသှယျလိုသူမြားအနဖွငျေ့ myanmaracc2014@gmail. com သို့လညျးကောငျး ဖုနျးနံပါတျ ဝ၆၇-၈၁၀၃၃၄၇၊ ၈၁၀၃၂၇၃ သို့လညျးကောငျး ဆကျသှယျနိုငျကွောငျး သိရသညျ။